Koowheel Electric Skateboard Quick Start Guide - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Remote jiro toro-hevitra :
1.Charge famantarana ho eo, rehefa mamaly ny
2.Battery fahazavana sy famantarana amin'ny Direction midika Izany dia midika hoe mifandray
3.BLUE midika bateria dia avo bateria dia midika hoe ambany MENA
4.Direction famantarana hiverina RED rehefa nofoanana
1. Hametraka marina ny bateria, ary manova screws
2.Turn amin'ny Remote mitodika aloha ary avy eo dia eo amin'ny solaitrabe mba mifandray.
3. Tsindrio Mandrosoa ho haingana, Mirosoa Back ho braking.
4. Skateboard bateria tondro, 4 jiro amin'ny alalan'ny 100%,
3. Jiro amin'ny alalan'ny 75%, 2 jiro dia midika hoe 50%, 1 fahazavana dia midika hoe 20% sisa.
Ny birao Koowheel dia manana hery be dia be. Araho ireo toro-hevitra mba hahazoana antoka azo antoka mitaingina zavatra niainany:
Mifindra ny bokotra mitombo tsikelikely rehefa mandeha.
Ataovy malalaka ny fihetsika eo amin'ny solaitrabe,
Ataovy ambany foibe ny hery misintona.
Miankina handroso rehefa haingana.
Miankina nihemotra rehefa braking.
MANDRAKARIVA manao fiarovan-doha.
Tadiavo misokatra, fisaka faritra madio
Rarivato ho an'ny mitaingina voalohany.
Vakio ny fampitandremana momba ny skateboard sy am-piandohana amin'ity boky ity.
OTHER fiarovana FITAOVANA Tena soso-kevitra.
Pepero ny Board ary hanova Battery entana
Light amin'ny dovia ho MENA, rehefa mamaly ny, mivily ho MAITSO rehefa nandrara tanteraka. Hanova ny bateria entana raha baiko iray fanampiny.
Tsarovy mandrakariva mba hanenjanana kokoa ny screws.
Fanamarihana: Raha bateria nametraka ela, mila ho tanteraka voampanga, ary avy eo dia feno indray mandeha isam-bolana.
1. Jereo ny toe-javatra nisy kodia mba ho azo antoka azy eo anoloan'ny tsirairay ary mihodinkodina malalaka mitaingina Zahao ny fiarabe sy ny kodia mba hahazoana antoka rehetra singa dia mafy tightened.
Aza mitaingina ny solaitrabe raha misy mandre feo ara-dalàna avy amin'ny kodiarana na maotera bearings
2. foana hitahiry ny board amin'ny toerana maina sy ventilated.
Arovy hiala mando fotoana mba tsy ho simba ny PCB zana-kazo sy ny bateria.
3. ihany no mampiasa ny Koowheel Charger. Uncertified lovia hafa mety mahatonga ny fiarovana olana.
Battery Tokony foana foana ao amin'ny toerana izay mari-pana ambanin'ny 60Celsius ambaratonga.
Pepero ny bateria isaky ny 2-3 volana, raha nandao maromaro nandritra ny fotoana ela mba tsy fahavoazana maharitra.
Tanteraka pepero ny bateria ho ny voalohany-ny fampiasana.
Tandremo ny mamaly ny tontolo iainana maina sy madio, ho azo antoka ny mamaly ny seranan-tsambo dia maina alohan'ny anjara-raharaha tsirairay.
Aza miala board nikarakara raha mamaly ny
1. ihany no mampiasa ny faritra am-boalohany ho amin'ny solaitrabe ny tsy fiarovana olana.
2. Mandehana tsara ny fepetra amin'ny novakiny ka ho azo antoka tanteraka izany amin'ny fampisehoana braking.
3. menaka tsy tapaka ny bearings
4. beginners tokony mitaingina ny solaitrabe amin'ny mitandrina amin'ny malamalama ambonin'ny lalana.
5. Aza lena ary ny tonian'ny-tsara loatra iny lalana.
User boky * 1 Charger * 1
AC fahefana tady * 1
Koowheel birao dia miafina ao amin'ny taona iray mpanamboatra ny fiantohana any Etazonia, roa taona mpanamboatra ny fiantohana any Eoropa izay mandrakotra kilema amin'ny hafa sy ny ara-nofo. Tsy manarona fahavoazana vokatry ny fampijaliana, fampiasana ratsy, tsy firaharahiana, loza, na mitaingina rano. Battery fiantohana dia enim-bolana.
HO AN'NY REHETRA hiverina sy Warranty SHIPPING :
Mba hitandremako ny fandefasana boaty. Ny fiantohana dia tsy ahitana ny fahavoazana avy amin'ny tsy fahampian'ny nandefa fonosana.
ATAHORANA hahafaty na ratra LEHIBE
Isaky ny mitaingina Koowheel birao, dia hampidi-doza ny fahafatesana na ratra mafy avy amin'ny fahaverezan'ny fanaraha-maso, fifandonan'ny planeta, ka nianjera. Hanitsaka soa aman-tsara, tsy maintsy mamaky sy manaraka ny fampitandremana sy torolalana ao amin'ny boky fampianarana.
Foana manao fiarovan-doha, rehefa nitaingina. Aza rano, mando, malama / uneven faritra, havoana mideza, fifamoivoizana, triatra, lalamby, vatokely, vato, na vato misakana izay mety hiteraka fatiantoka ny vahana sy mahatonga ny fahalavoana. Aza alina mitaingina, faritra amin'ny mahantra hisongadina, sy toerana kely.
FAMPITANDREMANA: Aza mitaingina Koowheel board amin'ny tontolo, amin'ny inclines, na amin'ny hafainganam-pandeha izay tsy ho soa aman-tsara eo amin'ny fanaraha-maso iray unpowered longboard. Raha toa ny Wireless interferenceor bateria tsiny, dia mety mila miantehitra amin'ny Skating teknika toy ny footbraking na sliding hijanona.
FAMPITANDREMANA: Aza RANO!
Ny birao dia tsy Koowheel rano porofo. Elec- tronics, bearings, sy ny singa hafa dia azo simba. Water fahasimbana dia tsy misaron ambanin'ny Warranty.
FAMPITANDREMANA: fiantraikany HEVITRA!
Ataovy rantsan-tananao, volo, ary ny akanjo lavitra fehin, Motors, kodiarana, ary ny faritra rehetra mihetsiketsika
FAMPITANDREMANA: ATAHORANA NY Electric Taitra!
Aza manokatra na hanova elektronika housings, izay ihany koa ny fiantohana voids.
IANAO NO KOOWHEEL: Masìna ianao, mitaingina andraikitra sy hanaja ireo izay manodidina anareo, na noho ny fiarovana sy hanampy hampiroborobo ny fanatanjahan-tena sy ny fomba vaovao amin'ny fitaterana.